मोटी भन्दा पातली केटी किन बढी मन पराउँछन् पुरुषहरु ! – Jagaran Nepal
मोटी भन्दा पातली केटी किन बढी मन पराउँछन् पुरुषहरु !
सैलाई स्लिम केटीहरू से’क्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्य’क्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। पातलो शरीर छिनेको कम्मर भएकी युु’वतीले जो कोहि यु’वालाई पनि सजिलै आ’कर्षित गर्न सक्दछिन् ।